किन विवादिद बन्यो एसिया प्यासिफिक समिट र प्रधानमन्त्रीको अवार्ड? – Everest Times News
२०७५ मंसिर १९, बुधबार ०८:५९
क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टका अधुरा काम पूरा गर्न आएको र जिससलेसमेत गर्न नसकेको ‘पवित्र बिहे’ गरेर नयाँ युग शुरु गरेको दाबी गर्ने युनिफिकेसन चर्चसँग आवद्ध विवादास्पद एनजिओले गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुरस्कृत भएका छन् ।
युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ)ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंसिर १६ गते नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार प्रदान गरेको हो । संस्थाकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेकी हुन् । पुरस्कारका साथमा उनलाई सम्मानपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन– २०१८ को अवार्ड वितरण समारोहमा नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’बाट पुरस्कृत गरिएको हो । पुरस्कारको राशी एक लाख डलर छ ।
अवार्ड लिने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन्
प्रधानमन्त्री ओलीले अवार्ड ग्रहण गरेसँगै उनको चौतर्फी आलोचना भयो । विवादित संस्थाले दिएको पुरस्कार ग्रहण गरेको आलोचना भइरहँदा यो अवार्ड पाउने उनी एक्ला नेपाली भने होइनन् । यो अवार्डबाट यस अघि तीन जना नेपाली सम्मानित भइसकेका छन् ।
नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीले यो अवार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो अवार्ड पाइसकेका छन् । त्यस्तै अर्का प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पनि यो अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।
त्यस्तै यो अवार्ड डा. सुरेशराज शर्मालाई पनि प्रदान गरिएको थियो । उनी काठमाडौं विश्व विद्यालयका भाइस चान्सलर तथा युपीएफका नेपाल शाखाका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् ।
कार्यक्रम किन विवादित बन्यो ?
गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा शुरुमा सरकार सहआयोजक बनेको थियो । गैरसरकारी संस्थाको सहआयोजक सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको व्यापाक विरोध गर्‍यो । सहआयोजकबाट हट्न जनदबाव उत्तिकै थियो । तीव्र विरोधपछि नेपाल परिवार दलनै ने क पामा विलय गराएका एकनाथ ढकालको शक्तिको आडमा सहआयोजक बनेको सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
त्यस्तै १४ गते शुरु हुने कार्यक्रमका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मङ्सिर १३ देखि १६ गतेसम्म सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू ग¥यो । यो विषय पनि तीव्र विवादमा तानियो । आइएनजिओले गरेको कार्यक्रममा जनतालाई दुःख दिन जोरविजोर प्रणाली लागु गरेको भन्दै अवज्ञा हुन थाल्यो । जसले गर्दा भोलिपल्ट १४ गते नै सरकारले यो प्रणाली हटायो ।
यस्तै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारी खर्चको व्यवस्थापन विवादको अर्को कारण हो । त्यसले पनि कार्यक्रमलाई झनै विवादमा तान्यो । सरकारले करोडौ खर्च गर्न लागेपछि विवाद ओइरिएको हो । सहआयोजकबाट सरकारको नाम हटाए पनि कार्यक्रमका लागि सरकारसँग ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पछि त्यो रकम खर्च गर्ने कुरा पनि सरकारले गरेन ।
आयोजक नै विवादित संस्था
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ) यसको आयोजक हो । युनिभर्सल पिस फेडेरेसन विवादास्पद आइएनजिओ हो । यसका संस्थापक सन म्युङ मून र उनकी पत्नी हाक जा हान मुन हुन् । सन् २००५ मा यो संस्था उनीहरुले स्थापना गरेको सोही संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
कम्युनिस्टका कट्टर आलोचक, स्वघोषित मसिहा र अत्यन्तै विवादित व्यक्ति सन म्युङ मूनको सन् २०१२ मा निधन भएको थियो । मूनका गतिविधि विवादास्पद मात्र हैनन्, रोचक पनि छन् ।
मूनले नै युनिफिकेसन चर्चको स्थापना गरेका थिए । जुन यो शताब्दीकै सबैभन्दा विवादास्पद धार्मिक अभियान भएको द इन्डेपेन्डेटले जनाएको छ ।
‘जिसस क्राइस्टले आफ्ना अधुरा काम गर्न मलाई खटाएको हो,’ उनको दाबी यस्तै हुन्थ्यो । उनका अनुयायीहरूलाई उनले दिने निर्देशन पनि रोचक छ ।
अनुयायीहरु आफ्नो जीवन साथी चुन्ने अधिकार मुनलाई छाडिदिन्थे । किनभने उनले भने अनुसारको जोडीले बिहे गरेमात्र पापमुक्त रगतको नाता तयार हुन्छ भन्ने दावी उनको थियो ।
विवाह गरे हुन्छ भनेर मूनले अनुमति दिएपछि के के गर्नुपर्ने भन्नेबारे मूनको युनिफिकेसन चर्चले निर्देशन नै तयार पारेको थियो । जसमध्ये एउटामा नवविवाहित दम्पतीले सबैभन्दा पहिला ब्याटले एक अर्कालाई हान्नुपर्ने र त्यसपछि मूनको चित्र अगाडि निर्देशन दिइएका आसनमा बसेर तीन दिनसम्म यौन सम्पर्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उनी भन्ने गर्थे, ‘विवाहितले मात्रै भगवानको राज्यमा प्रवेश पाउँछन् ।’ मूनले आफ्नै भान्छेकी छोरीसित बिहे गर्दा उनको उमेर ४० वर्षको थियो । दुलही भने मात्र १७ वर्षकी ।
मूनले छोडेर गएको विशाल व्यावसायिक, राजनीतिक र धार्मिक साम्राज्य उनका सन्तानहरूले सम्हालिरहेका छन् । र, उनका एकजना छोरा जस्टिन मून अमेरिकाको हतियार उत्पादन कम्पनी ‘क्हर आर्म्स’ का मालिक छन् ।
अमेरिकामा धर्म प्रचार गरेर उनले प्रशस्त कमाएपछि कर छलेको अभियोगमा १८ महिना जेलसमेत बस्नुपरेको थियो । मूनका अनौठा चर्तिकलाहरुबारे विस्तृत जानकारीसहितको रिपोर्ट द न्यु रिपब्लिकमा छापिएको छ ।
यही संस्थाको नेपाल शाखा युनिभर्सल पिस फेडरेसनका नेपालका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल हुन्, जो नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष पनि थिए । उनको पार्टी चुनावअघि नेकपा एमालेमा विलय भएको थियो । एमाले माओवादीसँग एकीकृत भएपछि उनी पनि अहिले सत्तारुढ दुई तिहाईको नेकपा सरकारका नेता हुन् ।